5 Arimood oo aad ku kasban karto kalsoonida gacalisadaada - Banaadirsom
Home Arimaha Bulshada 5 Arimood oo aad ku kasban karto kalsoonida gacalisadaada
Raggu waxay doonayaan in ay farxad kula noolaadaan xaaskooda. Waxay doonayaan in ay helaan kalsoonideeda balse si arimahaas loo helo waxaa muhiim ah in aad ka shaqeyso wadadii lagu gaari lahaa.
Halkaan waxaan ku soo bandhigaynaa 5 arimood oo wadada kalsoonida u dhisi kara reerkaaga.
Ka caawi shaqada guriga
Rag badan ayaa aaminsan in hawsha guriga ay tahay mid dumarka u gaar ah, oo markii ay xaafada yimaadaan filaya in waxkasta isku saaranyihiin. Inkastoo haddii uu ninku shaqeeyo ay u badantahay in xaasku ay hawsha guriga meel saarto, hadana in aad jikada la gasho xaaskaaga oo aad ka caawiso hawsha guriga sida cunto karinta, nadaafada, caruurta iwm waxay dhisaysaa galgaceylka iyo kalsoonida ay kugu qabto xaaskaaga.
Uga sheekee noloshaada
Cilada ugu weyn ee haysata lamaanaha Soomaalida ayaa ah in aysan ka wada hadlin xaalada noloshooda. Marka uu qof ka mid ah maalintii guriga ka baxo oo habeenkii uu soo laabto ayuusan uga warameyn maalintaas waxyaabaha uu la soo kulmay. Uga waran xaaskaaga oo kala sheekayso nolosheeda iyo taada. Tani waxay kordhinaysaa xiriirkiina oo waxay abuuraysaa isku soo dhawaasho.
Shumi oo habsii xaaskaaga
Marka aad guriga timaado ama markaad ka baxayso xaaskaaga shumi ama habsii. Waxaa la ogaaday in tani ay kordhiso dareenka labada qof isku qabaan.
Waqti sii galmada
Marka lamaanuhu ay waqti badan wada noolyihiin waxaa caadiyan hoos u dhacda inta koor ay isku galmoodaan. Xiriir galmo lahaan ah waa mid xiiso la’aan ah. Waxaa lagaa doonayaa in aad gacalisadaada galmada ka qanciso. Arinta ugu weyn ee burburisa kalsoonida lamaanaha waa galmo la’aan ama iyada oo aan tayo lahayn, oo inta degdeg lagu kala baxo hadana la kala seexdo.
Haka cararin sariirta galmada ka dib
Qaladka ugu weyn ee raggu sameeyaan dhinaca galmada waa in marka ay biyo baxaan ay durbadiiba dhinac isku tuuraan ama ay sariirta isaga takaan. Dumarku waxay ugu dareen jilicsanyihiin galmada ka dib. Haka tagin dhinaceeda ee u ogoloow in ay barkato gacantaada oo ay jirkaaga ku sii milicsato. Tani waxay abuurtaan kalsooni weyn iyo isku hubaal xaga sariirta ah.